Indawo yokuhlala yaseAgrelo Bueu elunxwemeni
I-Apartment e-Bueu phambi kwe-Agrelo beach: igumbi langaphandle elinekhitshi elikhulu elinebhedi yesofa, igumbi eliphindwe kabini, igumbi elineebhedi ezi-2 kunye negumbi lokuhlambela elibanzi. Ukonwabela iBueu kunye neemeko ezingqongileyo zeRias Bajas.
I-Apartment ebekwe kumgangatho wesibini wendlu ephambi kolwandle lwase-Agrelo-Portomayor, kumasipala waseBueu. Kukulungele ukonwabela ulwandle kwaye wazi iGalicia kunye neRias Baixas. Iikhilomitha ezingama-60 ukusuka eSantiago de Compostela kunye neekhilomitha ezingama-20 ukusuka ePontevedra.
Indlu iphambi kolwandle lwase-Agrelo-Portomayor, kunye neflegi eluhlaza. Ulwandle oluthule kakhulu ukonwabela kunye nabantwana. I-1 km ukusuka kumbindi weBueu, ilali yokuloba enezibuko elihle kunye neelwandle ezininzi ezifanelekileyo zokuqubha.
Abanini bezindlu bahlala kwindlu enye, kumgangatho wokuqala. Iyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso ezinokuvela.
Inombolo yomthetho: THYmwYD2
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bueu